Inona no mahatonga an'i Optimizely matanjaka be? Ao amin'ny ivon'ny endri-dahatsoratra misy azy no misy ny maotera antontan'isa mahomby indrindra amin'ny fitaovana fahatelo, mamela anao hifantoka bebe kokoa amin'ny fahazoana mivantana fitsapana manan-danja - tsy mila miahiahy ianao fa diso ny fandikanao ny valinao.
Raha te hanararaotra tsara an'izany anefa dia ilaina ny mahatakatra ny zava-mitranga ao ambadiky ny seho. Ireto misy fomba fijery 5 sy paikady hahafahanao mampiasa ny fahaizan'i Optimizely toy ny pro.
Rehefa manomana andrana dia alao antoka fa fantatrao hoe inona ny metrika ho tena Avaratranao amin'ny dingan'ny fanapaha-kevitrao, ataovy izay ho Metrikao Kilonga. Avy eo, tazomy ny sisa amin'ny lisitr'ireo metrikao amin'ny alàlan'ny fanesorana izay zavatra tsy tafahoatra na azo tsapain-tanana.
Optimizely dia tsara amin'ny fanomezana anao fomba maro mahaliana sy manampy amin'ny fizarana ny valin'ny andrana. Ohatra, azonao atao ny mandinika raha misy fitsaboana sasany mahomby kokoa amin'ny birao vs. finday, na mandinika ny tsy fitovizan'ny loharanom-pifamoivoizana. Rehefa matotra anefa ny programa fanandramana ataonao dia maniry haingana ny fizarana vaovao ianao - ireo dia mety ho an'ny fampiasana anao manokana, toy ny fizarana ho an'ny fotoana iray vs. fividianana famandrihana, na amin'ny ankapobeny toy ny "mpitsidika vaovao vs. miverina mody" (izay, Tsoriko fa mbola tsy azontsika fantarina hoe maninona no tsy omena ao anaty boaty izany.
Ny haavon'ny statistikan'i Optimizely izay voalaza fa “manan-kery foana” noho ny hevitra matematika antsoina fitiliana manaraka - Izany dia tena mahatonga azy ireo ho azo itokisana kokoa noho ireo an'ny fitaovana fanandramana hafa, izay mora tohina amin'ny karazana olana "mitsikilo" raha mamaky azy ireo haingana ianao.
Ilaina ny mandinika izay haavon'ny statistika manan-danja izay heverinao fa manan-danja amin'ny programa andranao. Raha 95% no fivoriambe ao amin'ny fiarahamonina siantifika, dia manandrana ny fanovana ny tranokala izahay fa tsy vaksinina. Safidy iraisana iray hafa eo amin'ny tontolon'ny andrana: 90%. Nefa ve ianao vonona hanaiky tsy fahatokisana bebe kokoa mba hampandehanana ny andrana haingana kokoa sy hitsapana hevitra bebe kokoa? Azonao atao ve ny mampiasa 85% na manan-danja statistika 80% mihitsy aza? Ny minia mikendry ny fandanjana valisoa atahorana anao dia afaka mandoa dividends exponential rehefa mandeha ny fotoana, ka diniho tsara izany.